Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier, Ultrasonic Humidifier, Ultrasonic Air ကို Humidifier ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier,Ultrasonic Humidifier,Ultrasonic Air ကို Humidifier,အနံ့ပျံ့ Humidifier,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Ultrasonic Humidifier
Ultrasonic Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier, Ultrasonic Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Ultrasonic Air ကို Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အပူချိန်နှင့်အတူ Cool Mist Air Humidifier 220v
ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့ ultrasonic Humidifier
အိတ်ဆောင် Ultrasonic Vaporizer Essential Oil Air Humidifier
ရောင်စုံ / နွေးထွေးသောအလင်းများရုံးစားပွဲအတွက် Humidifier အသေးစား
ကလေးငယ်များအတွက် 150ml Air Moisturizer စိုထိုင်းဆ
အိမ်အကျယ်အ ၀ န်းအတွက်ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Ultrasonic စိုထိုင်းဆ
ကြီးမားသောအခန်းအတွက် 700ML Big Cool Mist Humidifier
3MHZ 5W PP ABS Humidifier ကိုဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည်
တိတ်ဆိတ်သောဆူညံသံခေတ်သစ် Cool Mist Humidifier Filter
မူလစာမျက်နှာရုံးပျိုးခင်း ROOM တွင်များအတွက်မြူခိုး Humidifier Cool
အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့် Mini ကို USB မြူခိုး Humidifier Cool
Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ Air ကို Humidifier
Ultrasonic White က Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပန်းအိုးအနံ့ Humidifier 400ml
နယူး Ultrasonic Humidifier ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံ
ရောင်းရန်မြူခိုး Air ကို Humidifier ရနံ့ကုထုံ Cool
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် 400ml Humidifier Ultrasonic Cool မြူခိုး
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Ultrasonic ရေနံပျံ့မြူခိုး Humidifier Cool
အရောင် Glass ကိုလေတပ် Ultrasonic မြူခိုးရေနံ Humidifier
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၂၈ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 525 * 355 * 276mm / 12pcs
အပူချိန်နှင့်အတူ Cool Mist Air Humidifier 220v အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ရွေးချယ်မှု - လူကြိုက်အများဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ (၅ - IN-1 သစ်သားစပါးရနံ့သင်းသင်းရေမွှေးဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ (Lavender, Peppermint, ချိုမြိန်လိမ္မော်၊ ယူကလစ်ပင်၊ လက်ဖက်ပင်နှင့် lemongrass) ။ 100%...
ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့ ultrasonic Humidifier သဘာဝသစ်သားစပါးကြည့် - ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင့်အားသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့်အသေးစိတ်ကျသောသစ်သားစပါးပျံ့နှံ့မှုကိုနှစ်သက်သည်။ ရေ ၃၀၀ မီလီမီတာရှိသောရေပမာဏ၊ ၆ နာရီခန့်၊ အားနည်းသောအခိုးအငွေ့များ၌ ၈ နာရီခန့်၊ အိပ်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ယောဂအခန်း၊ ကလေးခန်း၊ PP Safe use for...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 8.46 - 9.54 / Piece/Pieces
အိတ်ဆောင် Ultrasonic Vaporizer Essential Oil Air Humidifier Mini Diffuser & Mini Humidifier: အခန်းထဲကိုအမွှေးနံ့သာတွေနဲ့ဖြည့်စွက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုရေထဲသို့ထည့်ပါ။ အချို့သောအထူးအဆီများသည်ကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။...
ရောင်စုံ / နွေးထွေးသောအလင်းများရုံးစားပွဲအတွက် Humidifier အသေးစား ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင် 1.Resin အိမ်ရာသည်ပျံ့နှံ့မှုကိုခေတ်ပေါ်နှင့်ရှေးခေတ်အနုပညာခံစားမှုနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ပြည့်စေသည်။ ၂။ Ultrasonic...
ကလေးငယ်များအတွက် 150ml Air Moisturizer စိုထိုင်းဆ တစ်မူထူးခြားသောဒီဇိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပျံ့နှံ့ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ သင့်အိပ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရုံးခန်း၊ spa (သို့) ယောဂအခန်းများနှင့်လှပသောအလှတရားကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ အင်္ဂါရပ်များ: လေထုအရည်အသွေးနှင့်စိုထိုင်းဆကိုတိုးမြှင့်ခြင်း -...
အိမ်အကျယ်အ ၀ န်းအတွက်ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Ultrasonic စိုထိုင်းဆ ဤလှပသောစတုရန်းပုံ ၁ ပုံမှ Aromatherapy Essential Oil Diffuser သည်သင်၏လေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးသင်၏အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးများကိုပါပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။ သင်၏လူနေမှုနေရာနှင့်လိုက်ဖက်သောလှပသောဒီဇိုင်း မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Ultrasonic...
ကြီးမားသောအခန်းအတွက် 700ML Big Cool Mist Humidifier လှပသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားသီးနှံအစိုဓာတ်မီးဖိုသည်သင့်အားပန်းပုရုပ်တစ်မျိုး၏ပုံပန်းသဏ္giveာန်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ultrasonic နည်းပညာဖြင့်, ဒီ humidifier အလုပ်လုပ်သောအခါအလွန်တိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်ပါသည်,...
3MHZ 5W PP ABS Humidifier ကိုဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ usb မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများပျံ့နှံ့မှု၊ ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္andာန်နှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လေအေးပေးစက်၏ခြောက်သွေ့မှုမှကင်းဝေးစေရန်အလွန်ကောင်းသောအေးစက်သောမြူမှုန်ကိုလှပသောမွှေးရနံ့ဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။...
တိတ်ဆိတ်သောဆူညံသံခေတ်သစ် Cool Mist Humidifier Filter မျက်မှောက်ခေတ်ရိုးရှင်းသောပုံစံ - ဒုံးပျံဒီဇိုင်း၏ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်ဖြင့် ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်လုပ်ဆောင်မှုစုံလင်သည်သာမကသင့်အိမ်သို့ခေတ်မီစတိုင်ကိုထည့်သွင်းရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ အိမ်၊ ယောဂ၊ ရုံးခန်း၊ spa၊ အိပ်ခန်း၊...
မူလစာမျက်နှာရုံးပျိုးခင်း ROOM တွင်များအတွက်မြူခိုး Humidifier Cool ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဆန်းသစ် & စတိုင်အေးအခိုးအငွေ့အနံ့ပျံ့သဘောသဘာဝဥယျာဉ်၌ဖွဲ့စည်းပန်းအိုးများ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ `သစ်သားစပါးကို look` finish ကိုသစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့အိမ်တွင်းသဘာဝတစ်ခုထိတတ်၏,...
အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့် Mini ကို USB မြူခိုး Humidifier Cool မှော်ငွေ့၏ရေတံခွန်! တစ်ရောင်စုံအလင်းနှင့်အတူကပြီးပြည့်စုံသော ambiance ပေးသည် နောက်ဆုံးပေါ် ultrasonic Atom နည်းပညာ သင့်ရဲ့အခန်းကိုလာဗင်ဒါ၏အံ့သြဖွယ်ရနံ့ (ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်မည်သည့်ရနံ့) နဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မည် သင်ရုံရေနံရေထဲသို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်မရှိမဖြစ်ထား...
Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ Air ကို Humidifier DITUO Glass ကိုပျံ့ကိုထိပုတ်ပါရေနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအသုံးပြုတဲ့ BPA-အခမဲ့ဖန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဖန်တီးဖို့ရနံ့ကုထုံများ timeless အစဉ်အလာနှင့်အတူသိပ္ပံနည်းကျဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှီဝဲ။ အဲဒီအစားအပူ, ဒီခေတ်ပြိုင် ultrasonic...
Ultrasonic White က Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပန်းအိုးအနံ့ Humidifier 400ml ထူးခြားတဲ့စတိုင်သစ်သားစပါးကိုဒီဇိုင်းတည်ဆောက်-in ကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ illumination အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ LED အလင်း, ultrasonic လှိုင်းတံပိုး, လုံခြုံပြီးတိတ်ဆိတ်, အနံ့ပျံ့ breeze နှင့်ရနံ့ကုထုံမွေ့လျော်, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချလည်းအသားအရေ moisturize...
နယူး Ultrasonic Humidifier ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံ [ဘလူးတုသ်နာယက Insert]: အကြိုက်ဆုံးဂီတသို့မဟုတ်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ၏သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရင်းကစားရန်စမတ် Bluetooth ကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုသုံးသည်။ ယောဂ, တှေးတောဆငျခွသို့မဟုတ် Ambient ဂီတအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော Bluetooth ကိုရေနံပျံ့။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး Set-up...
ရောင်းရန်မြူခိုး Air ကို Humidifier ရနံ့ကုထုံ Cool စတိုင်အသွင်အပြင်: ဒီအနံ့ပျံ့လက်ဖြစ်ဖန်ထံမှနေသူများကဖန်တီးတစ်ခုချင်းစီထုတ်ကုန်များ၏ပုံစံများထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးကျန်းမာသင်၏အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ 200ml ရေတိုင်ကီ, PP ပစ္စည်းရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူအနုပညာတစ်ခုသဘောမျိုးရှိပါတယ်။ စသည်တို့ကိုအိပ်ခန်း, အသကျရှငျတဲ့အခန်း,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 11.23 - 12.62 / Piece/Pieces
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် 400ml Humidifier Ultrasonic Cool မြူခိုး ကြော့ Flower DESIGN: Bloom ရဲ့အလှတရားကနေလှုံ့ဆော်မှုရေးဆွဲခြင်း, ဂန္သစ်သားစပါးကို finish ကိုနှင့်တကွ, အနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့အရည်အသွေးမြင့်မားဘဝနှင့်အတူသဘာဝအလှအပပေါင်းစပ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။...
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Ultrasonic ရေနံပျံ့မြူခိုး Humidifier Cool အသံတိတ် --- နှောင့်အယှက်စက်ဆူညံသံနှင့်အတူအခြားအမွှေးအကြိုင်ပျံ့မတူပဲ, ဒီခရီးဆောင်လေကြောင်း humidifier ယင်း၏တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေး features; အိပ်ခန်း, ကလေးတွေအခန်းတစ်ခန်း, ရုံး, ဟိုတယ်နှင့်ယောဂအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ ရေတက်အသုံးပြုသောအခါကို Safe --- Automatic,...
အရောင် Glass ကိုလေတပ် Ultrasonic မြူခိုးရေနံ Humidifier UNIQUE ကြော့ DESIGN: အနုပညာဖန်ဘောလုံးနဲ့လုပ်ထားတဲ့သည်,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 8.31 -9/ Piece/Pieces
တရုတ်နိုင်ငံ Ultrasonic Humidifier ပေးသွင်း
ဘယ်လို Ultrasonic Humidifier အလုပ်?
အငွေ့အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier သူတို့ရဲ့ filter များမှတစ်ဆင့်လေကြောင်းမှုတ်ရန်ပရိသတ်များအပေါ်အားကိုး။ အခြားတစ်ဖက်, ထိုကဲ့သို့သော DITUO Ultrasonic Humidifier အဖြစ် ultrasonic လေကြောင်း humidifier, တွင်တစ်ဦး ultrasonic ကြိမ်နှုန်းမှာတုန်ခါစေတဲ့သေးငယ်တဲ့အက်တမ်ပန်းကန်ဆံ့။ ဤရွေ့ကား ultrasonic အသံလူသား inaudible ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အချို့တော်တော်လေးအစွမ်းထက်သောအရာတို့ကိုနိုင်စွမ်းပါတယ်။ သူတို့ကအစခြားပြီးတစ်ဦးအေးမြငွေ့သို့ humidifier ရဲ့ built-in ရေလှောင်ကန်ထဲကရေအမှုန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ device ထို့နောက်ချက်ချင်းအခန်းတစ်လျှောက်လုံးစိုထိုင်းဆဖြန့်ဝေခြင်း, လေထုသို့ဤဒဏ်ငွေအခိုးအငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါ။
ultrasonic အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier သင့်အိမ်များအတွက်စဉ်းစားရကျိုးနပ်များမှာအဘယ်ကြောင့်အများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ကပတ်ပတ်လည်အဆိတ်ငြိမ် humidifiers အချို့ပါပဲ။ ultrasonic humidifiers အပူကိုမသုံးကြဘူးကတည်းကထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်မျှသာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်သည်။ ဒါဟာရေရှည်မှာ၌သင်တို့၏ဥပဒေကြမ်းများအပေါ်သိသာထင်ရှားသောငွေစုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်ဤဖြစ်ကောင်း ultrasonics ၏အရှိဆုံးအဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အနံ့ပျံ့ humidifier အလွယ်တကူခရီးဆောင်ဖြစ်ပြီး, ချက်ချင်းပေါ်နှင့်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ယင်းအခိုးအငွေ့လှိုမှတဆင့်ထုတ်လုပ်ကြောင့်အပူ element ကရေပြုတ်ဖို့အဘို့အဘယ်သူမျှမစောင့်ဆိုင်းအချိန်ဖြစ်စေ, ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားစဉ်းစားအိမ် humidifier ငွေ့၏အထင်ကြီးပမာဏထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကသေးငယ်အခန်းသငျ့လျြောသောအစိုဓာတ်ကိုအဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းများအတွက်စံပြ option ကိုပါပဲ။
Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier
Ultrasonic Air ကို Humidifier
Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier ပျံ့